Mgbake dị egwu site n'ụdị faịlụ disk U - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>ig>Mgbake dị egwu site n'ụdị faịlụ disk U
Mgbake dị egwu site n'ụdị faịlụ disk U
Ihe mgbakwunye data na-enye ọrụ mgbake dị ike dabere na ụdị faịlụ, enwere ike iji ya bụrụ nke mkpuchi faịlụ. Nweghachi nke ọma weputara faịlụ. A na-etinye faịlụ ndị a natara site na ụdị faịlụ na ndekọ "Niile Tydị". A na - akpọ faịlụ ndị agbakere site na usoro a site na nọmba ma debe ya na folda dị iche iche Dịka ọmụmaatụ, a ga-etinye akwụkwọ Okwu na folda docx na docx. Faịlị ndị a nwetaghachiri n'ụdị bụ nsonaazụ nyocha nke ngwanrọ nke ndị na-echekwa nchekwa Ọ bụrụ na enweghị ike weghachite faịlụ ahụ nke ọma dịka usoro ndekọ mbụ ahụ si dị, yabụ onye ọrụ ahụ kwesịrị ịlele “ụdị niile "Ihe data dị na", nke a bụ ahịhịa ahịhịa na-azọpụta ndụ maka nchekwa data U disk! Chekwaa ọganihu nke nyocha ahụ
Mgbe ụfọdụ, enwere ọtụtụ faịlụ ị ga-eweghachite, faịlụ ndị ahụ furu efu na-enwetaghị nke ọma n'otu oge, onye ọrụ nwere ike ịchekwa ọganihu nyocha ahụ, Yabụ ị ga-eche oge ọzọ i nyocha ọzọ, na-azọpụta oge. Nzọụkwụ 6: Lelee faịlụ ndị ọ dị mkpa ka eweghachi ma rụọ ọrụ mgbake
Mgbe ịchọtara faịlụ ndị ọ dị mkpa iweghachi, onye ọrụ ahụ nwere ike lelee faịlụ ndị ọ dị mkpa iweghachi, wee pịa "Bọtịnụ na-esote" ga - a copyomi faịlụ ndị a. Mgbe ịpịrị bọtịnụ “Next”, onye ọrụ ahụ nwere ike ịtọ nchekwa zube maka ịchekwa faịlụ, dịka e gosiri n’okpuru:
Ntọala Mgbe emechara folda nke lekwasịrị anya, gaa n'ihu pịa bọtịnụ "Next", mgbake data ga-amalite ịrụ ọrụ data data, dị ka egosipụtara na nchikota a:
U disk data mgbake
Pịa "Mepee folda" iji mepee folda nke zoro ezo, onye ọrụ ahụ nwere ike ịhụ faịlụ ndị eweghachite; pịa bọtịnụ "nkọwa" iji hụ ọnọdụ data n'ezie; pịa bọtịnụ "Emecha" iji mezue oge a. Ọrụ data mgbake U disk. Dịka ị pụrụ ịhụ, mgbake data ahụ na-enye nnyonye anya ụdị ọrụ, usoro mgbake data dị mfe, anaghị achọ ka onye ọrụ nwee ahụmịhe data data dị ukwuu, ọchọghịkwa onye ọrụ. Nweta ọtụtụ ihe ọmụma kọmputa dị omimi. Ọ bụ ezie na arụmọrụ mgbake data diski USB dị nnọọ nfe, anyị ka na-echetara ọtụtụ ndị ọrụ na mgbake data bụ ọrụ a ga-arụ Ndị ọrụ kwesịrị ịkpachara anya na arụ ọrụ kwa ụbọchị na nhazi nke data, ma mepụta ndabere nke data ndị ọzọ dị mkpa iji zere mfu data.
PreU disk na-apụ n'anya na mberede n'oge eji
NextIweghachite nkebi mgbe emezighi mmụọ